Amakhasino eSkrill South Africa - Amakhasino ahamba phambili Wokwamukela iSkrill
Ikhaya / Izindlela zokukhokha / amakhasino e-inthanethi amukela i-skrill
Amakhasino E-inthanethi Amukela i-Skrill
I-Skrill uhlelo lwe-ewallet olwalwaziwa nge-Moneybookers. Incazelo yokuthi kungani igama lashintshwa ngo-2011 ayibalulekile kangako kunendlela le sevisi esebenza ngayo, enhle kakhulu ngokusho kwamashumi ezigidi zabantu abayisebenzisela ukukhokha amakhasino abo. Isungulwe ngo-2001, i-Skrill ingenye yezindlela ezithandwa kakhulu ekwenzeni izinkokhelo emakhasino e-inthanethi, sisho naseNingizimu Afrika, futhi lokhu kungenxa yokuthi inika abasebenzisi bayo izinto ezintathu abazifunayo ngempela: ukuphepha, isivinini nokuba lula. Uma ungaqiniseki ukuthi lolu hlelo luphephe, luyashesha nokuthi lulula kanjani ukulusebenzisa, buza noma ubani phakathi kwabantu abayizigidi ezingu-36 emazweni angu-200 emhlabeni jikelele abalusebenzisayo uhlelo ukuthi bacabangani ngalo.
Uma ufuna indlela ephephile yokwenza amadiphozithi emakhasino e-inthanethi, kunzima ukucela indlela ephephe kune-Skrill. Kufaka phakathi ubulula bokusebenzisa lolu hlelo kanye nejubane lokucubungula amadiphozithi, uzothola ukuthi awufuni ukusebenzisa enye indlela yokukhokha. Kungani ungaqali ukudlala emakhasino amukela i-Skrill namuhla bese uzibonela ukuthi kulula, kuphephile nokuthi kushesha kangakanani ukudiphozitha?
Uhlu olungezansi lukunikeza amakhasino e-Skrill asebenzisa iRandi (ZAR) laseNingizimu Afrika ungaqala ukudlala kuwo namuhla futhi uma ungaqiniseki ngekhasino ozoyizama, kungani ungazami wonke? Lawa ngamakhasino akuvumela ukuthi udiphozithe futhi ukhiphe imali usebenzisa iSkrill, ngokuphepha nobulula bokusebenzisa.
Amakhasino E-Inthanethi E-Skrill Esiwancomayo:
Izinzuzo zokusebenzisa i-Skrill
Ukudlala emakhasino e-inthanethi amukela i-Skrill kukuvulela izinzuzo ezithile, ebaluleke kakhulu kuzo ukuphepha. I-Skrill isebenzisa isofthiwe yokuguqula imininingwane kanye nezinye izinqubo zokuphepha zobuchwepheshe ukuqinisekisa ukuphepha kwabasebenzisi bonke. Inkampani iphinde iqashe ochwepheshe bezokuphepha ku-inthanethi, kubandakanya ongoti bokukhwabanisa, ochwepheshe bengcuphe (risk) nabanye, futhi isiza ikhasino nomdlali uma kunesimo sokubuyisela imali. Njengoba ungacabanga, amakhasino ayakuthanda lapho abadlali bekhetha lolu hlelo.
Futhi i-Skrill ikuvumela ukuthi udlulise imali ngokushesha ngakho-ke uma udlala emakhasino e-inthanethi e-Skrill, ungafinyelela izimali zakho ngokushesha bese uqhubeka nokudlala uma uwina ngokulandelana. Inqubo yokudiphozitha nayo ilula kakhulu futhi ayikho into enzima ngokusebenzisa i-Skrill. Uma usebenzisa le ndlela kaningi, ungase uqaphele ukuthi amanye amakhasino amukela i-Skrill anikela ngamabhonasi akhethekile okudiphozitha kaningi nge-Skrill. Njengoba kushiwo ngenhla, lolu hlelo luphezulu ohlwini lwethu lwamakhasino e-inthanethi ayizintandokazi futhi azophuma endleleni yawo ukuklomela abadlali abalusebenzisayo.
Indlela yokuqala ukudlala nge-Skrill
Ukuze ufake imali ku-akhawunti yakho yasekhasino ye-inthanethi, uzodinga ukuvula i-akhawunti nge-Skrill. Lokhu kuzodinga ukuthi ubhalise usebenzisa imininingwane yakho yomuntu siqu kanye nemininingwane yakho yezezimali. Le nqubo ephephile yinqubo okuzodingeka uyiyenze kanye futhi uma usuqedile, uzokwazi ukuqala ukwenza amadiphozithi ekhasino. Khumbula ukuthi uzodinga ukufaka imali ku-akhawunti ye-Skrill, okusho ukuthi ufaka imali evela ku-akhawunti yakho yasebhange noma ikhadi lesikweleti. Le yinqubo ephephile kepha kungaba nokubambezeleka lapho uyisebenzisa, kuya ngokuthi ibhange lakho lishesha kangakanani ukucubungula izinkokhelo.
Uma usukulungele ukudiphozitha imali ekhasino, vakashela ukheshiya wasekhasino bese ukhetha i-Skrill njengendlela yakho yokukhokha. Okuzodingeka ukwenze ngaleso sikhathi ukungena ngemvume ku-akhawunti yakho ye-Skrill lapho utshelwa ukuthi wenze kanjalo, faka inani, uqinisekise lelo nani bese uqala ukudlala. Lokhu kungabonakala njengenqubo ende kunaleyo oyijwayele, kodwa khumbula ukuthi izinqubo ze-Skrill zikhona ngokukhethekile ukuzama ukunqamula ukukhwabanisa, ngakho-ke bekezela ujabulele ukuthula kwengqondo.
Ukukhipha imali usebenzisa i-Skrill
Uma ungaba nenhlanhla futhi usukulungele ukukhipha imali, yazi ukuthi nakuba inqubo yokukhipha imali ilula kakhulu, kungenzeka ukuthi ithathe isikhathi eside. Inqubo yokukhipha imali ingathatha izinsuku ezimbili ukuqedela, kuya ngokuthi udlala kuyiphi ikhasino, kepha njengoba lolu hlelo lwe-e-wallet lwaziwa kahle emakhasino e-inthanethi, ezikhathini eziningi kwenzeka ngokushesha. Okuhle kunakho konke, azikho izindleko okhokhiswa zona lapho ukhipha imali. Esikhundleni salokho, ikhasino ithatha lezo zindleko futhi uthola ukugcina konke okuwinile.